Ukuveliswa kweGrooved Concentric Reducer kunye neFektri | Zhihua
Izixhobo ezinemiqolo zivumela indibano ekhawulezileyo kunye nokuguqulwa kweenkqubo ezinkulu zemibhobho kuba zibonelela ngozinzo olukhulu kulungelelwaniso olukhulu lombhobho. Kukwabiza kakhulu ukufaka, ukugcina kunye nokwenza umzila kwakhona. Ukulungelelaniswa okune-grooved, izindlu zokudibanisa izilayidi ezihambelana nephedi ye-bolt; oku kunika isenzo sokubambelela ecaleni kwe-offset, ukubonelela ngqongqo ngakumbi kwilungu. Izixhobo ezilahliweyo kwakhona kunceda ukuba ukwazi ukudibanisa imibhobho kwiimeko apho indawo ikwipremiyamu.
Izixhobo ezilahliweyo zinamacandelo amathathu aphambili: iigrooves ukulungelelanisa imibhobho, iibholiti zokuqinisa izikhonkwane, kunye noxinzelelo lokuphendula uphawu lweebhokisi ukukhusela ukuvuza. Iigroves kwiziphelo zemibhobho zenza ukuba kube lula ukudibanisa kunye nokucima. Izinto ezilungiselelweyo zingagcina ixesha nemali yenkampani yakho kuba azifuni ukujija, ukubhabhathaza, okanye ukujija.
Iinkampani kwezemigodi, ukhuseleko lomlilo, i-HVAC, unyango lwamanzi amdaka, kunye necandelo lezityalo ezisebenzisa amandla zihlala zisebenzisa imibhobho kunye nezihlanganisi ezinezixhobo ezinemijelo. Ngokungafaniyo neenkqubo eziqhelekileyo apho amatywina athathwa khona ngoxinzelelo, ezi gaskets zokutywina zenza uxinzelelo ngaphandle kwemibhobho, ukomeleza uzinzo lokulinganisa okune-grooved. Ngenxa yokhuselo olongezelelekileyo lwamalungu agobileyo, asetyenziswa nakwiinkqubo zomkhosi nezaselwandle. Uhlobo lwe-C-amatywina erabha kathathu enza ukuvuza kube nzima!
Ukudibanisa okunemiqolo kuyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo ezinje "ukunciphisa", "ukuguquguquka", okanye "ukuqina". Izixhobo ezilahliweyo inokuba flanges, radii elifutshane, isiphelo isiphatho iminqwazi (okanye "isiphelo-yonke iminqwazi"), tee-iimilo (okanye "nokufakwa umnqamlezo"), iti ngoomatshini, reducers concentric, neengqiniba. Iminqwazi yokuphela eyenzelweyo yenzelwe ukuba ibe sisiphelo sendlela yokusebenza efanelekileyo. Zisetyenziselwa ukuhla, i-sprigs, i gaji, iidreyini kunye neentloko zokuchela. Tees zoomatshini zikuvumela ukuba wenze iivenkile ngaphandle kokuba udibanise okanye usebenzise izixhobo ezininzi.
• Khawuleza ukuhlangana
• Kulula ukuqhuba iiNkqubo zeNdlela kwakhona
4) Ukulungiswa okutyheliweyo akufuneki:
• Ukudibanisa iintsimbi
5) Izibonelelo zokulinganisa ngokufanelekileyo:
Uyilo loyilo lwenza ukufakwa okulula, okukhawulezayo kwaye okungabizi kakhulu, kungekho mfuneko yezixhobo ezizodwa okanye uqeqesho.
• Indibano ekhawulezayo ngokusebenzisa umgca wemveliso eyahlukileyo ye-bolt eyodwa.
• Ugcino olukhulu ngexesha kunye nemali ebangelwe kukushenxiswa kwesidingo se-welding kunye ne-threading.
• Ukunciphisa ukuhanjiswa kwengxolo kunye nokungcangcazela kunye nokwenza ukuba unxibelelwano luzithintele.
• Ukuba bhetyebhetye kulungelelwaniso lwemigca kwiimeko ezinzima.
• Akukho bungozi bokuvuza ngenxa yotshintsho lobushushu okanye iintshukumo ezibangelwa kukungcangcazela okanye ukunyikima.
• Yenza ukuba kusetyenziswe imibhobho esondeleyo, ukunciphisa ubunzima kunye nexabiso.
• Ukukhuselwa komlilo
• Unyango lwamanzi amdaka
• Izityalo zamandla
PSI / MPA Imilinganiselo
L mm Isatifikethi
50X32 / 2X1 60.3X33.7 300 / 2.07 64 I-FM UL
50X32 / 2X1¼ 60.3X42.4 300 / 2.07 64 I-FM UL
50X40 / 2X1½ 60.3X48.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X25 / 2½X1 73.0X33.7 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X32 / 2½X1¼ 73.0X42.4 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X40 / 2½X1½ 73.0X48.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X25 / 3ODX1 I-76.1X33.7 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X32 / 3ODX1¼ I-76.1X42.4 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X40 / 3ODX1½ I-76.1X48.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
65X50 / 3ODX2 76.1X60.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X25 / 3X1 88.9X33.7 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X32 / 3X1¼ 88.9X42.4 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X40 / 3X1½ 88.9X48.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X50 / 3X2 88.9X60.3 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X65 / 3X2½ 88.9X73.0 300 / 2.07 64 I-FM UL
80X65 / 3X3OD 88.9X76.1 300 / 2.07 64 I-FM UL
100X65 / 4¼ODX3OD I-108.0X76.1 300 / 2.07 76 I-FM UL
100X80 / 4¼ODX3 108.0X88.9 300 / 2.07 76 I-FM UL
100X50 / 4X2 114.3X60.3 300 / 2.07 76 I-FM UL
100X65 / 4X2½ 114.3X73.0 300 / 2.07 76 I-FM UL
100X65 / 4X3OD 114.3X76.1 300 / 2.07 76 I-FM UL
100X80 / 4X3 114.3X88.9 300 / 2.07 76 I-FM UL
125X100 / 5½ODX4¼OD 133.0X108.0 300 / 2.07 89 I-FM UL
125X100 / 5½ODX4 133.0X114.3 300 / 2.07 89 I-FM UL
125X50 / 5½ODX2 139.7X60.3 300 / 2.07 89 I-FM UL
125X65 / 5½ODX3OD 139.7X76.1 300 / 2.07 89 I-FM UL
125X80 / 5½ODX3 139.7X88.9 300 / 2.07 89 I-FM UL
125X100 / 5½ODX4 139.7X114.3 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X50 / 6¼ODX2 159.0X60.3 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X65 / 6¼ODX3OD 159.0X76.1 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X80 / 6¼ODX3 159.0X88.9 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X100 / 6¼ODX4¼OD 159.0X108.0 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X100 / 6¼ODX4 159.0X114.3 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X125 / 6¼ODX5½OD 159.0X133.0 300 / 2.07 89 I-FM UL
150X50 / 6½ODX2 165.1X60.3 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X65 / 6½ODX3OD 165.1X76.1 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X80 / 6½ODX3 165.1X88.9 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X100 / 6½ODX4 165.1X114.3 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X125 / 6½ODX5½OD 165.1X139.7 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X50 / 6X2 168.3X60.3 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X65 / 6X2½ 168.3X73.0 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X65 / 6X3OD 168.3X76.1 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X80 / 6X3 168.3X88.9 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X100 / 6X4 168.3X114.3 300 / 2.07 102 I-FM UL
150X125 / 6X5½OD 168.3X139.7 300 / 2.07 102 I-FM UL
200X50 / 8X2 219.1X60.3 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X65 / 8X3OD 219.1X76.1 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X80 / 8X3 219.1X88.9 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X100 / 8X4 219.1X114.3 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X125 / 8X5½OD 219.1X139.7 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X150 / 8X6½OD 219.1X165.1 300 / 2.07 127 I-FM UL
200X100 / 8X4 219.1X168.3 300 / 2.07 127 I-FM UL
Egqithileyo Ukuncitshiswa koCingo oluCociweyo
Okulandelayo: Iadaptha esisangqa
Umnqamlezo wokuCutha ukuNqunyulwa